Nematodes- Aghọgbụ Ahụhụ Nduku Na Aghọrọ Ugbo - Potatoes News
Potato cyst nematode (PCN) bu agwa ogwu nduku nke UK. Ihe dị ka 65% nke ala eji akụ nduku bu oria na PCN. Iji chịkwaa PCN, ndị ọrụ ugbo na-adabere ugbu a na usoro dị iche iche gụnyere; Chemicals dị ize ndụ na gburugburu ebe obibi, na-agbatị ntụgharị ka a na-akụ poteto naanị otu n'ime afọ asatọ, ma ọ bụ na-ahọpụta ụdị ndị na-eguzogide ọgwụ.
Site na mmemme ndị ọrụ ugbo ọhụụ, ndị ọrụ ugbo anọ dị na Shropshire na Lancashire na-elele usoro nchịkwa ọzọ na-eji osisi a maara dị ka ihe ọkụkụ akụ na-egbochi ahụhụ. Ha na Andrew Wade (OptiGro), Ivan Grove (nọọrọ onwe ha), Matthew Back (Harper Adams University) na Anne Stone (AHDB Poteto) esorola ọnụ wee rụpụta ụzọ dị mma iji wee guzobe kụrụ ọnya na ala UK.
Kedụ ka PCN si enweta ọnyà na-arụ ọrụ?
A na-akọwa mkpụrụ osisi ọnyà dị ka 'na-aghọ aghụghọ' karịa 'ịnyụ' osisi. Chemicals ndị a wepụtara site na ọnya mgbọrọgwụ na-egosi na nri dị mma ma na-ebute nematode ka ha pụta site na ebe nchekwa ha dị na cyst. Ndị nematodes na-amalite ịzụ nri na mkpọrọgwụ osisi mgbọrọgwụ kama poteto, n'ihu nduku cropping. A na - enweta uru abuo site na njikwa a - site n'iji osisi ọnyà ahụ, kama iji osisi nduku kacha mma, ndị nematodes enweghị ike ịnakọta ume zuru oke iji mụta ma mezue usoro ndụ ha, si otú a belata ohere nke ịbịakwute n'ime ala.
Abmepụta nduku ahu otutu nematode ọnyà kụrụ
Ndị ọrụ ugbo ahụ gbapuru mkpụrụ osisi ndị ahụ na ngwụsị June / mmalite July, obere oge ka ha nwesịrị ọka, na ịgha mkpụrụ nke abụọ mere otu ọnwa mgbe nke mbụ gasịrị. Ejila ụdị ọnyà abụọ - Solanum sisymbriifolium (nke na-agbanwe agbanwe) na Solanum scabrum (African nightshade). S. sisymbriifolium nwere ike belata njupụta PCN ruo 80% mana ọ siri ike ịmebe ya. Achọpụtaghị ụlọ ọrụ S. scabrum na iji ya eme ihe nke ọma na UK, mana ọ na-abịa site na ebe okpomọkụ na ebe dị elu, yabụ enwere ike ịba uru na UK.
Nematodes- nduku pests na ọnyà kụrụ
Ndị otu ahụ kwubiri na ịgha mkpụrụ miri emi nwere ike ịrụ ọrụ karịa nke na-emighị emi, yabụ ekpebiela iji tụnyere ntọala site na omimi miri abụọ: 1.5cm na 3cm. Ahọpụtabeghị ihe ubi ndị a n'ọtụtụ ọgbọ iji mee ka ha dabara adaba maka ịkọ ihe; kama nke ahụ, ha bụ osisi ọhịa a webatara ọrụ na nso nso a. N'ime ọhịa, mkpụrụ ndị dị otú ahụ ga-eto site n'ime mkpụrụ ha, ma ọ bụ n'ime nsị anụ. Yabụ, ebe anyị ga-atụ anya na a ga-egwupụta obere mkpụrụ na-emighị emi; ha anaghị apụtakarị.
Iji igwefoto ejiri aka na drones, otu a na-atụle mkpuchi ala akuku ma kesaa nke a site na otu WhatsApp ha na nzukọ. Ejiri PCN gbakọọ tupu ịgha mkpụrụ ọkụkụ ma tinye ya na mbibi mbibi ọnyà.
Ruo ugbu a, ozi ndị a na-ewere n'ụlọ bụ na ịgha mkpụrụ na mbụ, na-ezere ala ndị nwere mmiri na ụkọ mkpụrụ dị ka ihe ịga nke ọma. Ngwunye ihe ọkụkụ dị iche iche dịgasị iche n'etiti ugbo, mana na ihe ịtụnanya nke onye nyocha ụlọ nyocha, Andrew Wade, S. sisymbriifolium nke a kụrụ na 1.5cm miri emi nwere mkpuchi ala kachasị elu, "Echere m na scabrum ga-akawanye ike ma nwekwuo mmiri. N'akụkụ nke ikpe ahụ, ejiri m akụkụ akụ ụfọdụ n'akụkụ. Nke ahụ bụ na 1st June ma ọ mere nke ọma. N'ihi ya, ọ nwere ike ịchọrọ ọnụego mkpụrụ ka elu - a ghara otu mkpụrụ n'otu mkpụrụ ahụ n'ule ahụ. ” Nchọpụta ndị ahụ nwekwara ike ịgbagha nkwenye ndị otu ahụ na ịgha mkpụrụ miri emi nwere ike ịrụ ọrụ karịa nke na-emighị emi.
Lelee ọhụụ ọnyà ọhụụ kachasị ọhụrụ Ebe a.
Vydate mmachibido iwu
The ikpeazụ ọnwụ nke ihu ọma nke Vydate, pesticide ejiri chịkwaa cyst nematode (PCN), na 31 Disemba na-eweta ụlọ nyocha AHDB na-akwado ebe a na-elekwasị anya dị ka ọtụtụ ndị ọrụ ugbo nduku na-achọ ihe ndị ọzọ. Ndị ọrụ ugbo na Shropshire na Lancashire na-enyocha nrụpụta ọrụ nke akụ akụ ọnya na-achịkwa nematode. “Ọ dịkarịrị mkpa karịa ịnwe nchịkwa ọrịa na - akpata ọrịa na - akpata Vydate - anyị maara na ọ na - abịa mana ọ nwere ike ọ bụghị ngwa ngwa. Ruo afọ iri abụọ m na-eme atụmatụ na akụkụ nke usoro a ga-abụ itinye ihe ọkụkụ n'ime usoro anyị ga-agafe n'ugbo ahụ, "ka Neil Furniss, onye njikwa na ME Furniss & Sons na Shropshire kwuru.
Vydate Banyere Mkpụrụ Ubi Na-achọ Tochịkwa Nduku Pesti PCN dị n'Ihu
Tags: Emmụ Nematodesnematodes na nduku ubipestiọnyà kụrụ
Hallo Nduku. Kwa izu anyị na-ekwu banyere poteto. Ndị na-ekiri anyị n’ụwa niile.
Gbutu osisi ugbo na-akọ ugbo na-enye ndị ọrụ ugbo UK ụzọ dị ala